Home Wararka Xarbi Cali Kullane oo la hadlay warbaahinta kana hadlay dilka uu geystay...
Xarbi Cali Kullane oo la hadlay warbaahinta kana hadlay dilka uu geystay wiilkiisa
Aabaha ninka lagu tuhunsanyahay dilka Sir David Amess ayaa wargayska THE SUNDAY TIMES ee ka soo baxa dalka Ingiriiska u sheegay inuu aad uga naxay xariga wiilkiisa oo lagu xiray goobtii lagu tooriyeeyay Xildhibaanka.
Xarbi Cali Kullane, oo hore u ahaa la -taliyaha Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya – ayaa xaqiijiyay in wiilkiisa oo 25 jir ah oo haysta dhalashada Ingiriiska uu hadda gacanta ugu jiro booliska, Xarbi ayaa sidoo kale sheegay in booliiska la-dagaallanka argagixisada ee Scotland Yard ay soo booqdeen.
Isagoo ku sugan guriga walaashiis oo ku yaala waqooyiga London ayaa Kullane wuxuu yiri: “Aad ayaan u dareemayaa naxdin. Ma ahan wax aan filayay ama xitaa ku riyooday”.
Booliisku ayaa weerarkii ka dhacay Essex imika u baaraya sidii dhacdo argagixiso, oo laga yaabo inay la xiriirto xagjirnimada Islaamiyiinta.
Dhanka kale, waxaa socday baroor-diiq loo sameynayo xildhibaanka la dilay iyada oo shumacyo la dhigayo halkii uu weerarku ka dhacay, si loo xusuusto noloshii Sir David.
Wuxuu ninkani ku xiran yahay imika Saldhigga Boliska ee Essex, halkaasi oo ay Su’aalo ku waydiin doonaan waaxda booliiska ee ka hortagga Argagixisada. Booliiska ayaa laga yaabaa inay sii hayaan ninkan illaa Talaadada ka hor intaanay ku soo oogin dacwad, ama aysan sii daayaan.